आफ्नै कमाइले अर्बपति बनेका ९ वर्षका बालक, यस वर्ष मात्र कमाए २७ अर्ब -
आफ्नै कमाइले अर्बपति बनेका ९ वर्षका बालक, यस वर्ष मात्र कमाए २७ अर्ब
९ वर्षका एक बालक अर्बपति छन्, त्यो पनि आफ्नै कमाइले । उनले २०२० सालमा मात्रै २७ अर्ब रुपैयाँ कमाए । झट्ट सुन्दा अपत्यारिलो लाग्ने यो कुरा सत्य हो । रेयान काजी नामका ९ वर्षका बालकले डिजिटल प्लेटफर्म युट्युबबाट मात्रै २९।५ मिलियन डलर कमाइ गरेका छन् ।
उनी २०२० मा युट्युबबाट सबैभन्दा धेरै कमाइ गर्ने व्यक्ति बनेका छन् । अमेरिकाको टेक्सासका ९ वर्षका रेयान काजी युट्युबमा खेलौना र गेमलाई अनबक्स गरेको भिडियो राख्छन् । भिडियोमा उनले गेम र खेलौनाको रिभ्यू गर्छन् । उनले २०२० मा युट्युबबाट २९।५ मिलियन डलर कमाएका छन् । यसका अलावा उनले रेयान्स वर्ल्ड ब्राण्डेड टोय एण्ड क्लथिङबाट पनि उनले २०० मिलियन डलर कमाएका छन् ।
रेयानको रिभ्यूको तरिका मानिसहरुले निकै मन पराउन थाले र उनको फ्यान फलोइङ बढ्दै गयो । रेयानको लोकप्रियता तीन वर्षमै चरम स्थितिमा पुगिसकेको थियो । उनी २०१८ र २०१९ मा पनि युट्युबबाट सबैभन्दा धेरै कमाइ गर्ने व्यक्ति बनेका थिए । रेयानको लोकप्रियताका कारण कैयौं चर्चित खेलौना कम्पनी आफ्नो खेलौनाको रिभ्यू गराउन उनीकहाँ आउँछन् । २०२० मा युट्युबबाट धेरै कमाउनेको सूचीमा दोस्रो स्थानमा जिमी डोनाल्डसन छन् । किस्टर बिस्ट भनेर चिनिने डोनाल्डसनले २०२० मा युट्युबबाट करिब २४ मिलियन डलर कमाएका छन्
पछिल्लो पुस्ताका चर्चित ८ अभिनेत्रीः को होला उत्कृष्ट
सुपा देउराली मन्दिरको दर्शन गरी आजको राशिफल पढेर शेयर गरौ सबैको भलो हुनेछ:
कस्तो क्यान्सर पूर्णतय निको हुन्छ ?
आफैमाथि किन शंका ?
बालबच्चालाई उपहारमा के दिने ?
जाडोमा उत्तम मानसिक स्वास्थ्यका लागि शीर्ष सुझावहरू
आजको राशिफल २०७८ वैशाख २१ गते, मंगलवार, ४ मे २०२१। वैशाख कृष्णपक्ष, एक सेयरले तपाइको दिन शुभ रहने छ ||
भात खानुका फाइदै फाइदा, बासी भातका झन् फाइदा
बिहान कति बेला उठ्ने!
मान्छेमा तीन किसिमको दुःख कसरी उत्पन्न हुन्छ:
आफ्नो आमाको वास्तबिक जिवनको कहानी सुन्दा अन्जु पन्तको छोरीको आशु…
जब यी युवतीले आफ्नो मृ’त्यु हुने समय पहिल्यै थाहा पाएपछि जे गरिन…